Gbọ oloko na-esi London eburu Paris bụ otu n'ime Europe kachasị ọsọ. Ejiri Eurostar rụọ ọrụ, Inwere ike isi United Kingdom gaa France n'ime naanị elekere abụọ na nkeji iri na isii. Nke ahụ na-enye gị oge zuru ezu iji rahụ ụra, na-ụgbọ okporo, ma kporie ndụ a njem ụbọchị. Jide baguette ma wagharị na Louvre – ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'ịdị mma niile nke Paris nwere inye.
Anyị ekwuworị banyere Rome, mana Milan bụ obodo ọzọ dị ịtụnanya na Italy. Ihe dị iche na ndịda Italytali dị ka apụl dị na oroma, Milan bụ nnukwu ọgbara ọhụrụ. Mara maka ụdị ejiji dị elu na ihe omume dị elu, obodo ahụ ga-akwụsị n'oge ezumike ọ bụla nke ndị Italiantali. Ọ bụ ezie na ihu igwe adịghị ka Mediterranean, ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ụlọ yana ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ abụọ n'oge ọ bụla n'afọ.
A ga-ezumike Europe ọ bụla, Hamburg, na Copenhagen nwere ike ọ gaghị abụ obodo mbụ na-abanye n'uche gị maka njem nlegharị anya. Nke ahụ bụ ihe ihere, ezie, n'ihi na obodo abụọ ahụ jupụtara n'okike na ọwa mmiri na ọwa mmiri ndị mara mma. Hamburg bụ nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na north Germany. O nwere ike bụrụ na ị nụla ya na mbụ n'ihi njikọ ya na ndị nri pụrụ iche hamburgers. fun eziokwu – a na-akpọ ndị bi na Hamburg.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Nduzi Atụmatụ Europe na Zụọnụ Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Njem Europe eurotrip longtrainjourneys Rzọ ụgbọ oloko Train Travel Njem njegharị tripinspiration